Kulan lagu xoojinayay geedi socodka shaqo ee maamulada magaalooyinka DDSI. - Cakaara News
Kulan lagu xoojinayay geedi socodka shaqo ee maamulada magaalooyinka DDSI.
Jigjiga (CN) khamiis 17ka December, 2015, Kulankaasi oo uu soo diyaariyay xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta awooda maamulka DDSI ayaa waxaa ka soo qaybgalay,masuuliyiinta xafiisyada heer deegaan iyo masuuliyiinta maamulada magaalooyinka DDSI.
Kulankan ayaa waxay ujeedadiisu ahayd soo bandhigida daraasaad uu xafiisku ku sameeyay geedi socodyada shaqo ee 21 xafiis oo ka mid ah maamulada magaalooyinka DDSI.
Waxaana kulankaasi ugu horayntii ka hadashay wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta awooda maamulka DDSI marwo Maajida Maxamed Maxamuud, waxayna tidhi” xafiisku isaga oo ka duulaya natiijadii qiinayntii waxqabad ee qorshihii isbadalka koboca dhaqaalaha GTP1ga iyo qorshihii sanadkii 2007TI ee ku qotoma buuxinta/ gufaynta goldaloolada ka jirtay dhinaca geedi socodka shaqada, rifoomyadii iyo qaab-dhismeedka maamulada magaalooyinka, ayaa waxa uu aas aasay xafiisku gudiyo isku dhaf ah isaga oo la kaashanaya xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha DDSI iyo xafiisyada maamulada magaaloyinka, kuwaasi oo soo diyaariyay daraasaad dhamays tiran oo ku salaysan barnaamijka dib u habaynta geedi socodka shaqo ee (BPR) iyo qaabdhismeedka ay yeelanayaan magaalooyinka heerar-kooda kala duwan ayaa maanta waxa uu xafiisku idiin soo bandhigayaa daraasaadkaasi uu soo sameeyay si aad doorkiina uga qaadataan”
Wasiir ku xigeenka adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI mudane Maxamed Xasan Maxamuud oo ka hadlay isaguna furitaankii kulankaasi ayaa sheegay in daraasaadkan maanta la soo bandhigayaa sal u yahay dar dargalinta koboca magaalooyinka deegaanka ujeedada soo bandhigana tahay in ay xafiisyada heer deegaan ka qaataan kaalintooda kaga aadan hirgalinta daraasaadkan fulinta tilmaamaha hab-raacyada soo baxay.
Khabiiro ka socay xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta awood maamulka DDSI ayaa masuuliyiinta heer deegaan iyo kuwa maamulada magaalooyinka u soo bandhigay daraasaadkan, iyada oo ay masuuliyiinta iyo khabiiraduba siwada jir ah u gorfeeyeen daraasaadkan, ka dibna jihooyin midaysan laga qaatay meel-marinta geedi socodka shaqo iyo qaab-dhismeedka maamulada magaalooyinka.